Daawo Sawirro:-Hoggaamiye Burcad soo xirtay dharka Haweenka oo ku fashilmay inuu... | Koonfur Galbeed News
HomeArimaha DibadaDaawo Sawirro:-Hoggaamiye Burcad soo xirtay dharka Haweenka oo ku fashilmay inuu…
Daawo Sawirro:-Hoggaamiye Burcad soo xirtay dharka Haweenka oo ku fashilmay inuu…
5th August 2019 Arimaha Dibada, Wararka Maanta 0
Hoggaamiyahaasi oo lagu magacaabo Clauvino da Silva laguna naanayso Gaabow” ayaa isku dayey inuu ka baxsado Xabsiga Gericinóoo ku yaallo Galbeedka magaalladda Riyo De Janeeriyo ee dalka Brazil.
Ninkaasi ayaa la sheegay inuu soo xirtay labiska gabadhiisa oo ku soo booqatay Xabsiga, kadibna uu isku tijaabiyey inuu sidaas kaga baxo Albaabka Weyn ee Xabsiga.
Qorshihiisa waxa uu ahaa inuu gabadhiisa 19-jirka ah kaga tago gudaha Xabsiga, balse, Ilaaladda Xabsiga ayaa waxay qabteen isagoo ka gudbi lahaa Albaabka Weyn ee laga baxo.
Xoghayaha Maamulka Xabsiyadda Riyo De Janeeriyo waxa uu soo saaray Sawiro muujinaya Hoggaamiyaha la qabtay oo xiran labiska gabadhiisa, timo dhaadheer oo Artifishal ah iyo shaar ku sawiran Kackac.
Waxaa kaloo la soo bandhigay Muuqaal Video iyadoo uu iska bixinayo timihii uu soo xirtay iyo qaar ka mid ah dharkii uu xirnaa.
Hoggaamiyaha Burcadda ee Clauvino da Silva “Gaabow” waxaa la sheegay inuu ka tirsan yahay Hoggaanka Burcadda loo yaqaano Taliska Gasaanka (The Red Command), kuwaasi oo ah kooxda ugu awoodda badan Kooxaha Dembiilayaasha ee ka dhisan dalka Brazil ee ka shaqeeya inay Daroogadda u soo tahriibiyaan qeybo ballaaran oo ka mid ah magaalladda Riyo De Janeeriyo ee dalkaasi.
Maamulayaasha Xabsiyadda waxay sheegeen inay Hoggaamiyahaasi u wareejiyeen Xabsi Ammaankisia aad loo ilaaliyo, wuxuuna wajihi doonaa cunaqabatayn ganaax ee dhinaca Anshaxa.
Guddoomiye Mursal oo gaaray mid kamid ah dalalka Afrika
Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay Dad lagu rasaaseeyay Shabeellaha Dhexe